Itafula elincane le-vase Factory - Abakhiqizi baseChina abancane, abahlinzeki
【Umklamo omuhle nokusebenza okusebenzayo】 Faka umbala othile esikhaleni sakho sobuciko ngobuciko obungenakuphikiswa beCactus caddy! Ilungele ukugcina amapensela, amakhrayoni, amanothi anamathelayo, izikele, omaka bokusula abomile nokunye okuningi.
Construction Ukwakhiwa Okuqinile kwe-Acrylic】 Yenziwe ngopende wemvelo we-Ceramic nonobuthi wemvelo, ofanele abantu abadala noma izingane ezineminyaka engama-3 +.
【Asikho Isidingo Hlanganani could Ungayibeka ehhovisi, ekilasini, etafuleni elingenalutho, esikhungweni sobuciko, ekamelweni lokulala..Lokhu kukunciphise ukunciphisa iziqukathi futhi uhlele kangcono.
Cho Ukukhetha Okuphelele Kwezipho omes Kufika ekupakisheni ibhokisi lesipho eliqinile, isipho esihle kakhulu sothisha, abafundi, abafana namantombazane amancane.
【Gcina Ideski Lakho Lihlanzekile pot Ibhodwe lepensela elimibalabala eligcina amapeni abalulekile, amapensela nokuma okumile kugcina ideskithophu yakho ingaminyene futhi iqoqekile.
Dec I-Decorhouse Decor】 Yeka indlela enhle yokufinyelela i-Dollhouse yakho eyintandokazi! Thola lokhu njengesengezo sokusetha kudoli wakho, noma ngokwakho! Kufaka konke ongakudinga ukudlala nokuzenzisa.
Gift Isipho Esiphelele】 Amanani wokudlala ahlala isikhathi eside aphelele ezandleni ezincane! Kuhle kakhulu nge-Figure Play kanye ne-Addition ephelele yeqoqo labo le-Dollhouse.
Toy Ithoyizi Lokuthuthuka】 Lawa ma-playets athandekayo akhuthaza ukukhula kwengqondo okunempilo ngokuzenzisa kokudlala. Ukulingisa izindatshana kuzosebenzisa izinqubo ezilandelanayo nezicabangelayo zokucabanga, kuyilapho amakhono amahle emoto nobuchule buthuthuka njengoba abancane belawula izindawo ezimnandi.
Material Izinto Eziphephile】 Ukuqeda okungekho ubuthi nezinto zokuphepha ezinganeni.
【Qaphela】 Le nto ayiyona usayizi wempilo, ingeyokuhlobisa kuphela, ngaphandle kokusebenza okusebenzayo.
Okuphathekayo: ingilazi engenawo umoya, insimbi engagqwali ihlanganiswe nentambo yesandla ye-hemp, isitayela sezwe laseMelika.
Leli khabethe linikeza ikhandlela, lisikisela ukuthi lapho ikhandlela livutha, ungasinyakazisi isandla.
Ungaphinda uhlobise isikhala sakho njenge-vase, ubeke isitshalo, noma ulingise isitshalo.
Uma ucabanga ukuthi ikhandlela langempela liyingozi, ungafaka ikhandlela elenziwa ngogesi.
Ekufiseleni imfashini, abantu besimanje baya ngokuya basebenzise isibani samakhandlela, amakhandlela ukuhlobisa ikhaya, ukukhulisa umoya.
Yenziwe nge-Lead ingilazi yamahhala
Imiklamo emihle yanamuhla eyenziwe ngochwepheshe
Idizayinelwe ukusetshenziswa nokugcinwa kalula, efanelekile kuzo zonke izikhathi